बिनाटेन्डर धूलो दूध र मख्खन खरिद, ५७ लाख कमिशनको डिल – NewsAgro.com
Main News अनियमितता अर्थान्तर
February 6, 2018 February 7, 2018 newsagro0Comments ५७ लाख कमिशनको डिल, डीडीसीमा अनियमितता, दूध (स्किम मिल्क पाउडर), नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), बिनाटेन्डर धूलो दूध र मख्खन खरिद, मख्खन
काठमाडौं । नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले कमिसनको लोभमा टेन्डर बिनै करोडौं मूल्यबराबरको धूलो दूध (स्किम मिल्क पाउडर) र मख्खन खरिद गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र संस्थानकै आर्थिक विनियमावली विपरित एकै व्यक्तिबाट बिना टेन्डर पटकपटक गरी ३० करोड ३३ लाख मूल्यबराबरको धूलो दूध र मख्खन खरिद गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाखसम्मको र संस्थानकै आर्थिक विनियमले एक पटकमा डेढ लाखसम्मको सामानमात्र सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, संस्थानले ती दुवै व्यवस्था विपरित टेन्डर बिनै तीन पटकमा गरी तीन सय ६० टन (तीन लाख ६० हजार किलो) धूलो दूध र दुई सय १० टन (दुई लाख १० हजार किलो) मख्खन खरिद गरेको पाइएको छ।
संस्थानले पटकपटक गरी प्रतिस्पर्धा बिनै १५ करोड चार लाख ८० हजार मूल्यबराबरको तीन लाख ६० हजार किलो धूलो दूध खरिद गरेको छ। संस्थानले व्यवसायी अजय सरावगीसँग यस्तो दूध खरिद गरेको हो। मख्खन पनि सरावगीसँग १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको दुई लाख १० हजार किलो खरिद गरेको छ।
स्रोत भन्छ, ‘प्रतिकिलो धूलो दूध र मख्खनमा चार रुपैयाँ कमिसनको खेलमा बिना टेन्डर खरिद गरिएको हो। धूलो दूध र मख्खन खरिदबाट संस्थानको नेतृत्वले करिब ५७ लाख रुपैयाँ कमिसन बुझेका छन्।’ झण्डै ५३ वर्ष पुरानो संस्थानले कुन समय दूध पर्याप्त हुन्छ र कुन समयमा अभाव हुन्छ भन्ने विषयमा पूर्वजानकारी लिएर कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ।
सोही कार्ययोजनाका आधारमा समयमा टेन्डरमार्फत दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरित संस्थानका उच्च अधिकारी मिलेमतो गरी कमिसनको लोभमा बिना टेन्डर खरिद काम गर्दै आएका छन्। धूलो दूध र मख्खन खरिद प्रकरणमा पशुपंक्षी मन्त्रालय र आयोगले छानबिन थालेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाखसम्मको र संस्थानकै आर्थिक विनियमले एक पटकमा डेढ लाखसम्मको सामानमात्र सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
संस्थानको आर्थिक विनियमले खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमिति हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न बन्देज लगाएको छ। आर्थिक विनियमले एक पटकमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको सोझै बजारबाट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै एक पटकमा १० लाख रुपैयाँबराबरको सिलबन्दीमार्फत र १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संस्थानको सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकले आर्थिक विनियमको ‘विशेष परिस्थिति’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरी कमिसनको लोभमा यसरी खरिद गर्दै आएका छन्। विशेष परिस्थितिमार्फत आर्थिक विनियमले प्राकृतिक प्रकोपको समयमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानलाई आकर्षित गरी सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकले प्रतिस्पर्धा वेगर गत असारदेखि साउनमा सोझै दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरेको हो।
‘सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकले गत साउनमै आगामी असोज कात्तिकमा बाढी आउँछ भन्ने आकलन गरी विशेष परिस्थितिलाई आकर्षित गरी दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरेको भेटिएको छ’, संस्थानसम्बद्ध स्रोतले भन्यो,‘नियतवश विशेष परिस्थितिको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरी चलखेलका आधारमा खरिद कार्य भएको छ।’
संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक डा. इश्वरी अधिकारीले गत साउनमै धूलो दूध र मख्खन खरिद गर्न ग्लोबल टेन्र आह्वान गरिएको जानकारी दिए। ‘तर टेन्डरमा सहभागी भएर छनोट भएको इरानको कम्पनीसँग दुग्धजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्न सकेनौं’, अधिकारीले भने, ‘अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी गरेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न नमानेपछि छनोट भएका इरानी आपूर्तिकर्ताबाट ल्याउन सकिएन। त्यसपछि समय निकै कम भएकाले पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जान सकेनौं।’
महाप्रबन्धक नियुक्ति अन्योलमा
संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्तिमा अन्योल देखिएको छ। महाप्रबन्धक गंगा तिम्लिसिनाको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्त गर्न अन्योल सुरु भएको हो। तिम्लिसिना गत मंसिरमा तीन वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ को मंसिरमा तीन वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा तिम्लिसिनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तिम्लिसिनाको अवकाश पश्चात पशुपंक्षी मन्त्रालयले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न भएको हो। तयार पारिएको मापदण्डले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्न सकिने ठहर गर्दै निवर्तमान महाप्रबन्धक तिम्लिसिनाले पाटनस्थित उच्च अदालतले मुद्दा दायर गरेका छन्। तिम्लिसिनाले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले तत्कालका लागि नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रियामा रोक लगाएको छ।
← कस्तो अचम्म ! माघमा पनि धान रोपाइँ
आपूर्ति विभागलाई कारवाही नगर्न नाडाले दियो दबाब →
रुपन्देहीको कृषि पर्यटनले पर्यटक लोभ्याउँदै
लगानी बोर्डले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा ठूलो लगानी ल्याउँदै
एकजना नेपालीले ४५ सय भारु मात्रै साट्न पाउने